Tag: 3d vhidhiyo | Martech Zone
Tag: 3d vhidhiyo
Iwe pamwe wakaona mawebhusaiti mazhinji achishandisa mavhidhiyo ehupenyu pamapeji avo ekumhara. Hazvina mhosva kana iwe ukavatumidza mazita ekutsanangura mavhidhiyo kana mavhidhiyo emakambani; ivo vese vanoshandira chinangwa chimwe chete: kutsanangura chigadzirwa kana sevhisi nenzira iri nyore uye inokurumidza, izvo zvinoita kuti chive chinhu chikuru chekushambadzira kune chero bhizinesi. Nei paine akasiyana masitaera ekutsanangura mavhidhiyo? Chimiro chega chega chinokumbira kune imwe mhando yevateereri uye zvakare chinokanganisa bhajeti ye